मा-घर अतिरिक्त सुविधा सिर्जना गर्न इच्छा, धेरै needlewoman बुनाई पट्टियां लागि स्वीकार गरे। निस्सन्देह, सबैलाई सिर्फ एक ठूलो openwork नैपकिन बुनाई गर्न चाहन्छ, तर कुनै बुनाई अनुभव र अभ्यास असर गर्छ। पहिलो मोडेल अक्सर धेरै सफल छैनन्।
हात प्राप्त गर्न, यो एउटा सानो पनि जटिल छैन ढाँचाको पाउन राम्रो छ। Crochet पट्टियां crochet लागि शुरुआती सानो सही उत्पादनहरु बनाउन पनि समावेश छ। एक नैपकिन चयन गर्न पर्याप्त, जो मात्र होइन संलग्न रेखाचित्र, तर प्रक्रिया को एक विस्तृत विवरण सुरु गर्न।
Crochet पट्टियां crochet पातलो कपास मुद्दा बनेको: यस मामला मा यो सम्भव हावा जस्तै, openwork प्राप्त गर्न, छ उत्पादन। हुक सूत्रहरू फिट हुनुपर्छ: पातलो ग / ख मुद्दा प्रयोग गर्दा आदर्श हुक openwork पट्टियां संख्या 0.5 र 1 छन्।
तपाईं अडान रूपमा प्रयोग गर्न बाक्लो ऊतक बाँध्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यसलाई राम्ररी चयन गर्न छ मोटा यार्न को यार्न लेबल सूचीकृत संख्या मेल हुनुपर्छ नम्बर crocheting, बुनाई लागि।
सबैभन्दा लोकप्रिय राउन्ड पट्टियां crochet बुनाई केन्द्र मा सुरु: पहिलो हावा लूपहरूको, को घन्टी जोडिएको जो छ को निर्वाचकगण श्रृंखला टाइप। provyazki लागि प्रत्येक पछि श्रृंखला2वा3टाँका मिलेर उठाने श्रृंखला डायल गर्नुपर्छ। बस चित्रमा जस्तै, एक सुन्दर कपडा प्राप्त गर्न, यो आवश्यक छ ध्यानपूर्वक भूलें, निर्देशनहरू पालना गर्न भनेर बुनाई crochet पट्टियां को योजना - शुरुआती र अनुभवी knitters दुवै लागि जानकारी को मुख्य स्रोत। तर यदि एक पेशेवर बुनाई को पौराणिक कथा मा बाटो खोज्न पर्याप्त सजिलो छ, साईट राम्रो यो प्रतीक प्रत्येक के मतलब सम्झना गर्न प्रयास छ। Crochet पट्टियां यो मामला मा crochet धेरै छिटो जानुहोस् हुनेछ।
SC र SC, डबल र पनि तीन-SC बिना डबल र ठोस बारहरू, बारहरू,: तपाईं निर्णय भने, डेटिङ सुरु crochet पट्टियां यसलाई हुक गर्न, यो हतार छैन र विभिन्न बुना छ लूपहरूको अभ्यास राम्रो छ।
पहिलो प्रयोग को लागि तपाईं पङ्क्तिहरू बुना छ जो वर्ग वा आयताकार कपडा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, एकदम लोकप्रिय विकल्प पट्टियां - sirloin ग्रिड। बस बुनना: हावा लूपहरूको एक नम्बर (लम्बाइ लेखको चाहेको लम्बाइ मा निर्भर गर्दछ) डायल, त्यसपछि3उठाने लागि लूपहरूको बुनना। 3, हुक मा पहिले देखि नै छ कि एक, बुनना ढाँचा गणना छैन, हुक लुपमा शुरू सिलाइ बुनाइ र खाली कक्षहरू एकान्तरण द्वारा। खाली सेल सिर्जना गर्न आवश्यक दुई हावा लूपहरूको पछि, SC बिना एक स्तम्भ बुनना छ। SC संग पूरा सेल पङ्क्ति3स्तम्भ फिट गर्न। प्रत्येक नयाँ श्रृंखला को सुरुमा3हावा लिफ्ट पाश गर्न भूल छैन। यसरी तपाईं चेकर गरिएको नैपकिन बाँध्न।
तपाईं आनन्द भने crochet पट्टियां crochet यसरी, तपाईं मूल ढाँचाको सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। चित्रकला तपाईं तस्वीर नै बुनना को कक्षहरू भरिएको थियो र खाली कक्षहरू घेरिएको थियो यस्तो तरिकाले बुनना, ढाँचा वा आकार रुचि राख्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईं पनि THEMED पट्टियां के र तिनीहरूलाई उपहार रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: एक एङ्कर - एक जलसैनिक, भाइलिन - संगीत शिक्षक, मात्रा - विक्रेता।
तपाईं अझै पनि बुनाई crochet पट्टियां सिक्न चाहनुहुन्छ भने, गोलाकार openwork ढाँचासँग तुरुन्तै सुरु, त्यसपछि हामी वास्तवमा लागि सुरुमा यसलाई नेभिगेट गर्न कठिन हुनेछ तयार हुनु पर्छ, तर समय संग तपाईं पनि अद्वितीय भेरिएसनहरूमा सिर्जना गर्ने, लेखकको योजना पट्टियां विकास गर्न सक्षम हुनेछ।
आफ्नै साबुन जोश।
Dolphinarium नोवोसिबिर्स्क मा खुल्छ
Saute - एक पकाउने प्रक्रिया
Hack उठबस - सबै भन्दा राम्रो व्यायाम कूल्हों लागि
रूस मा विदेशी लगानी: 2013 को लागि पूर्वानुमान
एक सूट आफ्नो हातमा झिंगा साहसी गूंज बनाउन कसरी?
नुन बन्दागोभी, नुस्खा
875 को एक नमूना - यो के हो? सुन 875 नमूनाहरू - प्रति ग्राम मूल्य
धनु र मिथुन। यी संकेत को अनुकूलता
बच्चाहरु क्यान्सर (बालिका): प्रकृति र शिक्षा को विशेषताहरु